ဧရာဝတီ ဦးခေါင်းကစ အဆိပ်ခတ် ခံလိုက်ရပြီလား ..မြစ်ဆုံထက် ပိုပီး မြန်မာပြည် က တရုတ်ကြီး လိုချင်နေတဲ့ အရာ – Let Pan Daily
၁၉၉၄ ခုနှစ် လောက် ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ဒေသဖြစ်တဲ့ ပန်ဝါ၊ ချီဖွေ၊ ဖီမော်၊ စင်ကြိုင်၊ ကန်ပိုင်တီစတဲ့ ဒေသတွေမှာ တရုတ် ကုမ္မဏီတွေက Rare Earth တွေရှာဖွေတူး ဖော်နေခဲ့ကြ ပါ တယ် ။
တူးဖော်ပုံက Rare Earth ထွက်တဲ့ လုပ်ကွက် မှာ မြေကျင်း တွင်းဝ အကျယ် ၆ လက်မ၊ အနက် ၁၂ မီတာ အထိတူးပြီး အဲဒီ ကျင်းထဲ ကို အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် (NH4)2 SO4 တွေ ၊ အက်စစ်တွေ အပါအဝင် တခြား chemical compound ရောထား တဲ့ အရည်တွေ ထည့် တယ်
အဲဒီဓာတ်‌ပေါင်းရည်တွေ နဲ့ ဓာတ်ပြုပြီး ထွက်လာတဲ့ ပျော်ရည်တွေ ကို ကျင်းတွေအောက် မှာ ဂလှိုဏ်ဖောက်ပြီး သတ္တုရည်တွေ ကို ၁၀-၂၀ လောက်အကျယ်ရှိပြီး မိုးကာစ ခံထားတဲ့ သိုလှောင်ကန်တွေထဲ ကို ထည့်‌လှောင်ပါတယ်
လှောင်ထားပြီး မြေရှားရည်တွေ အနည်ထိုင်လာတဲ့ အခါ အပေါ်ယံ ရေကြည်တွေကို ပြန်စုပ် ထုတ်တယ်၊ ရလာတဲ့ အနည် အစိုတွေ ကိုတော့ အနည် သိုလှောင်ကန်ထဲကို ထည့်ပြီး အခြောက်ခံထား တယ်လို့ သိရပါတယ်
သိုလှောင်ထားတဲ့ အနည်တွေခြောက်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ မြေရှား လို့ ခေါ်တဲ့သတ္တု ကို ရရှိပြီဖြစ်လို့ အိတ်တွေထဲ ကို ထည့်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကို ကားကြီးတွေနဲ့ သယ်ယူသွား ပါတယ်
နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လိုနည်း နဲ့ ထုတ်ယူကြတယ် မသိပေမယ့် အဲဒီနေရာ မှာတော့ တရုတ်တွေက အဲဒီလိုနည်းတွေနဲ့ ထုတ်ယူနေကြတာပါ
မြေရှားသတ္တုတူးဖော်တဲ့အခါသုံးတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းရည် နဲ့ တူးဖော်နည်း ကို မြင်ယောင် ကြည့် လိုက်ပါ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်သလဲ
ဒီလိုတူးဖော်မှုတွေကြောင့် အဲဒီဒေသမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီး၊ သက်ရှိတွေ အဆိပ်သင့် သေကျေ ပျက်စီးရတာ မနည်းပါဘူး အခုထိလည်း ခံစားနေကြရတုန်းပါ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် တခြား လူတွေသိ ပ်မသိခဲ့ကြတာပါ
ကမ္ဘာပေါ် မြေရှားသတ္တု ထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံ‌တွေ ရှိပေမယ့် နိုင်ငံအများစုက မထုတ်ယူကြ ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် သတ္တု‌တူးဖော်မှု မှာ မြေရှားတူးဖော်မှုက သဘာဝဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးစေဆုံးဖြစ်နေလို့ပါ
ဒါကြောင့် မြေရှားရှိတဲ့နိုင်ငံအများစုက သူတို့ ကိုယ်တိုင် တူးဖော်မှုမလုပ်ကြပဲ သူများဆီကေ နပဲ ဝယ်ကြတာများ ပါတယ်
ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေနဲ့ စနစ်တကျတူးဖော် တဲ့ နိုင်ငံတွေတောင် ဒီလို လက်ရှောင်ကြတဲ့ မြေရှားသတ္တုကို မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ မြေကြီးထဲက တီတူးတာထက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ တူးဖော်နေကြ ပေါပေါများများခွင့်ပြုပေးနေတာပါ
အခုလည်း မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် ရှိ မြေဧက ၃ သိန်းခန့်မှာ ရွှေ၊ ကြေးနီနှင့် ဆက်စပ် သတ္တုများ ရှာဖွေရေး စမ်းသပ်တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခွင့် ကို Fortuna Metals Co,Ltdကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ချပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ
ရွှေ၊ ကြေးနီနဲ့ ဆက်စပ်သတ္တုရှာဖွေခွင့်မှာ ဆက်စပ်သတ္တုဆိုတာ ပါနေတဲ့ အပြင် Rare Earth ထွက်တဲ့ ဒေသ၊ တူးဖော်နေကြတဲ့ နေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် Rare Earth ရှာဖွေစမ်းသပ်ဖို့က ရာခိုင်နှုန်းပိုများ နေတယ်လို့ ထင် ပါတယ်
လက်ရှိချပေးတာက ရှာဖွေစမ်းသပ်ခွင့်ဆိုပေမယ့် သတ္တုဥပဒေအရဆိုရင် ရှာဖွေစမ်းသပ်ခွင့် ရတဲ့ ကုမ္မဏီကပဲ တူးဖော်ခွင့်ရ မှာဖြစ်ပြီး ဆက်စပ်သတ္တုလို့ ဆိုထားတဲ့ အတွက်လည်း Rare Earth တွေ့ခဲ့ရင် တူးဖော်ခွင့်ရှိနေပါတယ်
ဒီလိုအခြေအနေ မှာ တကယ်လို့ Rare Earth တွေ့ခဲ့မယ်၊ တူးဖော်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုနည်း နဲ့တူးဖော် ထုတ်လုပ်မှာလဲ
အပေါ်မှာရေးခဲ့သလို နည်းနဲ့သာ ဆိုရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို အဆိပ်ခတ် လိုက်တာ နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခေါင်လန်ဖူးဒေသဟာ မြန်မာ့အသက်သွေးကြောဧရာဝတီရဲ့ ရေဝေရေလဲဒေသဖြစ်နေလို့ပါ ။
ဧရာဝတီ ဦးခေါင်းကစ အဆိပ်ခတ် ခံလိုက်ရပြီလား .
ဘယ်လိုနည်း နဲ့ပဲထုတ်ထုတ် သေချာတာကတော့ အဲဒီနေရာမှာသာ Rare Earth ထုတ် ခဲ့ရင် အနည်းအများ အဆိပ်သင့်ကြရမှာပါပဲ ။
Rare Earth မထုတ်ပဲ တခြားသတ္တုတူးဖော်မယ် ဆိုရင်တောင် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးမယ် သတ္တုတူးဖော်တဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ လည်း ဧရာဝတီထဲ ရောက်လာ မှာ အသေအချာပါ
Save The Ayeyarwaddy လို့အော်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေလက်ထက်မှာ မှ မြန်မာ့အသက်သွေးကြော ဧရာဝတီလည်း ဦးခေါင်းကစ အဆိပ်ခတ် ခံလိုက်ရပြီလား တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ် ရပါတယ်…
Phay Nyein( လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည် )
ဧရာဝတီ ဦးခေါငျးကစ အဆိပျခတျ ခံလိုကျရပွီလား ..မွဈဆုံထကျ ပိုပီး မွနျမာပွညျ က တရုတျကွီး လိုခငျြနတေဲ့ အရာ
၁၉၉၄ ခုနှဈ လောကျ ကတညျးက မွနျမာနိုငျငံ နဲ့ တရုတျနိုငျငံ နယျစပျ ဒသေဖွဈတဲ့ ပနျဝါ၊ ခြီဖှေ၊ ဖီမျော၊ စငျကွိုငျ၊ ကနျပိုငျတီစတဲ့ ဒသေတှမှော တရုတျ ကုမ်မဏီတှကေ Rare Earth တှရှောဖှတေူး ဖျောနခေဲ့ကွ ပါ တယျ ။
တူးဖျောပုံက Rare Earth ထှကျတဲ့ လုပျကှကျ မှာ မွကေငျြး တှငျးဝ အကယျြ ၆ လကျမ၊ အနကျ ၁၂ မီတာ အထိတူးပွီး အဲဒီ ကငျြးထဲ ကို အမိုနီယမျဆာလျဖိတျ (NH4)2 SO4 တှေ ၊ အကျစဈတှေ အပါအဝငျ တခွား chemical compound ရောထား တဲ့ အရညျတှေ ထညျ့ တယျ
အဲဒီဓာတျ‌ပေါငျးရညျတှေ နဲ့ ဓာတျပွုပွီး ထှကျလာတဲ့ ပြျောရညျတှေ ကို ကငျြးတှအေောကျ မှာ ဂလှိုဏျဖောကျပွီး သတ်တုရညျတှေ ကို ၁၀-၂၀ လောကျအကယျြရှိပွီး မိုးကာစ ခံထားတဲ့ သိုလှောငျကနျတှထေဲ ကို ထညျ့‌လှောငျပါတယျ
လှောငျထားပွီး မွရှေားရညျတှေ အနညျထိုငျလာတဲ့ အခါ အပျေါယံ ရကွေညျတှကေို ပွနျစုပျ ထုတျတယျ၊ ရလာတဲ့ အနညျ အစိုတှေ ကိုတော့ အနညျ သိုလှောငျကနျထဲကို ထညျ့ပွီး အခွောကျခံထား တယျလို့ သိရပါတယျ
သိုလှောငျထားတဲ့ အနညျတှခွေောကျသှားပွီ ဆိုရငျတော့ မွရှေား လို့ ချေါတဲ့သတ်တု ကို ရရှိပွီဖွဈလို့ အိတျတှထေဲ ကို ထညျ့ပွီး တရုတျနိုငျငံ ကို ကားကွီးတှနေဲ့ သယျယူသှား ပါတယျ
နိုငျငံတကာမှာ ဘယျလိုနညျး နဲ့ ထုတျယူကွတယျ မသိပမေယျ့ အဲဒီနရော မှာတော့ တရုတျတှကေ အဲဒီလိုနညျးတှနေဲ့ ထုတျယူနကွေတာပါ
မွရှေားသတ်တုတူးဖျောတဲ့အခါသုံးတဲ့ ဓာတျပေါငျးရညျ နဲ့ တူးဖျောနညျး ကို မွငျယောငျ ကွညျ့ လိုကျပါ ဘယျလောကျကွောကျစရာကောငျးလိုကျသလဲ
ဒီလိုတူးဖျောမှုတှကွေောငျ့ အဲဒီဒသေမှာ သဘာဝပတျဝနျးကငျြပကျြစီး၊ သကျရှိတှေ အဆိပျသငျ့ သကြေေ ပကျြစီးရတာ မနညျးပါဘူး အခုထိလညျး ခံစားနကွေရတုနျးပါ လမျးပနျးအဆကျအသှယျခကျခဲတဲ့ဒသေ ဖွဈနတေဲ့ အတှကျ တခွား လူတှသေိ ပျမသိခဲ့ကွတာပါ
ကမ်ဘာပျေါ မွရှေားသတ်တု ထှကျရှိတဲ့နိုငျငံ‌တှေ ရှိပမေယျ့ နိုငျငံအမြားစုက မထုတျယူကွ ပါဘူး ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုရငျ သတ်တု‌တူးဖျောမှု မှာ မွရှေားတူးဖျောမှုက သဘာဝဝနျးကငျြ ထိခိုကျ ပကျြစီးစဆေုံးဖွဈနလေို့ပါ
ဒါကွောငျ့ မွရှေားရှိတဲ့နိုငျငံအမြားစုက သူတို့ ကိုယျတိုငျ တူးဖျောမှုမလုပျကွပဲ သူမြားဆီကေ နပဲ ဝယျကွတာမြား ပါတယျ
ခတျေမီနညျးစနဈတှနေဲ့ စနဈတကတြူးဖျော တဲ့ နိုငျငံတှတေောငျ ဒီလို လကျရှောငျကွတဲ့ မွရှေားသတ်တုကို မွနျမာနိုငျငံ ကခငျြပွညျနယျမှာတော့ မွကွေီးထဲက တီတူးတာထကျကို လှယျလှယျကူကူ တူးဖျောနကွေ ပေါပေါမြားမြားခှငျ့ပွုပေးနတောပါ
အခုလညျး မွနျမာပွညျမွောကျဖြားပိုငျး ကခငျြပွညျနယျ ပူတာအိုခရိုငျ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ ရှိ မွဧေက ၃ သိနျးခနျ့မှာ ရှေ၊ ကွေးနီနှငျ့ ဆကျစပျ သတ်တုမြား ရှာဖှရေေး စမျးသပျတိုငျးတာရေး လုပျငနျးမြား လုပျဆောငျခှငျ့ ကို Fortuna Metals Co,Ltdကို ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ခပြေးလိုကျပွနျပါပွီ
ရှေ၊ ကွေးနီနဲ့ ဆကျစပျသတ်တုရှာဖှခှေငျ့မှာ ဆကျစပျသတ်တုဆိုတာ ပါနတေဲ့ အပွငျ Rare Earth ထှကျတဲ့ ဒသေ၊ တူးဖျောနကွေတဲ့ နရောဖွဈနတေဲ့အတှကျ Rare Earth ရှာဖှစေမျးသပျဖို့က ရာခိုငျနှုနျးပိုမြား နတေယျလို့ ထငျ ပါတယျ
လကျရှိခပြေးတာက ရှာဖှစေမျးသပျခှငျ့ဆိုပမေယျ့ သတ်တုဥပဒအေရဆိုရငျ ရှာဖှစေမျးသပျခှငျ့ ရတဲ့ ကုမ်မဏီကပဲ တူးဖျောခှငျ့ရ မှာဖွဈပွီး ဆကျစပျသတ်တုလို့ ဆိုထားတဲ့ အတှကျလညျး Rare Earth တှခေဲ့ရငျ တူးဖျောခှငျ့ရှိနပေါတယျ
ဒီလိုအခွအေနေ မှာ တကယျလို့ Rare Earth တှခေဲ့မယျ၊ တူးဖျောခဲ့မယျ ဆိုရငျ ဘယျလိုနညျး နဲ့တူးဖျော ထုတျလုပျမှာလဲ
အပျေါမှာရေးခဲ့သလို နညျးနဲ့သာ ဆိုရငျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးကို အဆိပျခတျ လိုကျတာ နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ခေါငျလနျဖူးဒသေဟာ မွနျမာ့အသကျသှေးကွောဧရာဝတီရဲ့ ရဝေရေလေဲဒသေဖွဈနလေို့ပါ ။
ဧရာဝတီ ဦးခေါငျးကစ အဆိပျခတျ ခံလိုကျရပွီလား .
ဘယျလိုနညျး နဲ့ပဲထုတျထုတျ သခြောတာကတော့ အဲဒီနရောမှာသာ Rare Earth ထုတျ ခဲ့ရငျ အနညျးအမြား အဆိပျသငျ့ကွရမှာပါပဲ ။
Rare Earth မထုတျပဲ တခွားသတ်တုတူးဖျောမယျ ဆိုရငျတောငျ နောကျဆကျတှဲ အနနေဲ့ သဈတောပွုနျးတီးမယျ သတ်တုတူးဖျောတဲ့နရောမှာ သုံးတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှေ လညျး ဧရာဝတီထဲ ရောကျလာ မှာ အသအေခြာပါ
Save The Ayeyarwaddy လို့အျောခဲ့ကွတဲ့ လူတှလေကျထကျမှာ မှ မွနျမာ့အသကျသှေးကွော ဧရာဝတီလညျး ဦးခေါငျးကစ အဆိပျခတျ ခံလိုကျရပွီလား တှေးမိပွီး စိတျမကောငျးဖွဈ ရပါတယျ…
Phay Nyein( လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈပေးပါသညျ )